Ngaba iiNtengiso zeVidiyo yakho ziyabonwa? | Martech Zone
Yintoni ebonakala ngathi iyajongeka?
Factors that impacted viewability include consumer behavior, device, page layouts, player size, and position of the ad on the page. View Google's ingxelo epheleleyo yophando ephefumle le infographic. Ibandakanya ukuba kutheni uphando lwenziwe, indlela yokusebenza, ukubonwa lilizwe, kunye neenkcukacha ezithe kratya kwiziphumo.
tags: Google +IABIziko leNtengiso elisebenzayoIBhunga leNqanaba leendabaMnuukubonwa kwentengiso yevidiyozevidiyoyoutubeIintengiso ze-youtube
Meyi 29, 2015 kwi-2: 05 PM
Phole kakhulu! I-infographic yakho ishwankathela ingxelo yoqobo kaGoogle kakuhle. Ndinomdla wokwazi ukuba yeyiphi na inkampani oyisebenzisayo?
Meyi 31, 2015 kwi-1: 49 AM
Gautam, le infographic yenziwe ngaphakathi nguGoogle. Nangona kunjalo, DK New Media yenza infographics emnandi. Ndazise ukuba ufuna ulwazi oluthile.